COVID-19 တတိယလှိုင်းက ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ထိပ်တန်းကျန်းမာရေး သုတေသနအဖွဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ပြောကြား - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂူဝါဟာတီမြို့ရှိ အားကစားရုံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများအား ဧပြီ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua)
နယူးဒေလီ၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် COVID-19 တတိယလှိုင်းသည် ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အိန္ဒိယ ထိပ်တန်း ကျန်းမာရေး သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်သော အိန္ဒိယ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (ICMR) ၏ ကူးစက်ရောဂါဗေဒနှင့် ကူးစက်ရောဂါများဌာန အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Samiran Panda က ဇူလိုင် ၁၅ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။သို့ရာတွင် တတိယလှိုင်းသည် အားပျော့နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ဒုတိယလှိုင်းကဲ့သို့ မပြင်းထန်သည့် အခွင့်အလမ်းများရှိကြောင်း Panda က ဆိုသည်။၎င်းသည် ဒေသတွင်း NDTV ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းချန်နယ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံတစ်ဝန်း တတိယလှိုင်းကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ဒုတိယလှိုင်းလောက် မြင့်မယ် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်မယ်လို့တော့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု Panda က သတင်းချန်နယ်သို့ ပြောခဲ့သည်။
တတိယလှိုင်းသို့ ဦးတည်နိုင်သည့် ဖြစ်ရပ်လေးရပ်ကို Panda က စာရင်းပြုစုပြောပြခဲ့သည်။“ပထမအချက်အနေနဲ့ ပထမနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းမှာ ရရှိထားတဲ့ ကိုယ်ခံအား ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ဒါ ကျဆင်းသွားရင်တော့ တတိယလှိုင်းဆီ ဦးတည်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ ရရှိထားတဲ့ကိုယ်ခံအားကို ရှောင်ကွင်းသွားနိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ တတိယကတော့ ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အသစ်က ကိုယ်ခံအားကို ရှောင်ကွင်းသွားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ လူထုအတွင်းမှာ လျင်လျင်မြန်မြန်ပဲ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။ စတုတ္ထအချက်ကတော့ အကယ်၍ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ပြည်နယ်တွေက အချိန်မတိုင်မီ ဖြေလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါကူးစက်မှု ထပ်မံမြင့်တက်သွားနိုင်တာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
တတိယလှိုင်းသည် မလွဲမသွေ ဖြစ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသများစွာမှာ အစိုးရရော ပုဂ္ဂလိကတွေပါ COVID-19 လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းများကို ကျေကျေနပ်နပ် လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို ထောက်ပြလျက် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းဆရာဝန်များအဖွဲ့ဖြစ်သော အိန္ဒိယ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းက ယခု ရက်သတ္တပတ်အစောပိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူများအား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနေရာများနှင့် ဈေးများတွင် စုဝေးခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် သတိပေးထားသလို တတိယလှိုင်း သတိပေးချက်များအား ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
India’s top health research body scientist says COVID-19 third wave likely to hit by August end
NEW DELHI, July 15 (Xinhua) — Head of Epidemiology and Infectious Diseases at India’s top health research body Indian Council of Medical Research (ICMR), Dr Samiran Panda Thursday said the third wave of COVID-19 is likely to hit the country at the end of August.
Panda, however, said there are chances that the third wave will beamild one and not as intense as the second wave.
He made the revelations during an interview withalocal television news channel NDTV.
“There would beanationwide third wave but that does not mean that it would be as high or as intense as the second wave,” Panda told the news channel.
Panda listed four instances that could lead to the third wave.
“The first of these is an instance where the immunity acquired in the first and second wave due drop. If that goes down, it could lead toathird wave,” he said. “Secondly, there could beavariant that can bypass the immunity acquired. Third – the new variant may not be able to bypass immunity but can circulate fast in the population. Fourth – if the restrictions are lifted prematurely by states, it could lead toafresh surge.”
Earlier this week, the top doctors body in the country, the Indian Medical Association, said the third wave is “inevitable and imminent”, pointing out that “in many parts of the country both the government and public are complacent and engage in mass gatherings without following COVID-19 protocols”.
The federal government has also been warning people against crowding at tourist places and markets and urging them to take third wave predictions seriously. Enditem
People line up for the COVID-19 vaccine atastadium in Guwahati, India, April 22, 2021. (Str/Xinhua)
ဟေတီနိုင်ငံ သမ္မတအား လုပ်ကြံမှုနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် တရားခံပြေး ၃ ဦးအား ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှ စုံစမ်းစစ်ဆေး
အိန္ဒိယတွင် ကပ်ရောဂါအခြေအနေ လျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အတူ ပြည်သူလူထုက ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယတစ်လုံးမထိုးနှံတော့မည်ကို ပညာရှင်များ စိုးရိမ်လျက်ရှိ